Markaan qoro tan, waxaan bilaabeynaa usbuuca Maalinta Dhulka.
Sharaf ayay ii tahay in aan noqdo agaasimaha barnaamijka cusub ee barnaamijka Cimilada & Tamarta ee Midwest, oo aan muddo dheer tixgeliyey mid ka mid ah barnaamijyada hoggaamineed ee ka shaqeeya dardargelinta xalalka cimilada ee waddankan. Waxaa markii ugu horaysay la ii baray wasakheynta cimilada oo ah arday dhigta fasalka shanaad markii Mr. Lang uu na soo mariyey goobta baabuurta la dhigto si aan ugu duubno tuwaal waraaqo ah oo dusha ka saaran dhuumaha dusha si loo isbarbar dhigo qiiqa. Marka, waa gaar ahaan wax lagu farxo in loo soo baxo doorkan, sida Xeerka Baabuurta Nadiifku u imanayo midho dhal.
Waxaan sidoo kale si xeel dheer ula socdaa waqtiga qaadashada doorkan, oo dhacaya bartamaha sanadka oo banaanka soo dhigay xaqiiqooyin adag. Waxaan ku nool nahay duufaankii ugu fiicnaa ee masiibo caalami ah iyo cadaalad darro qoto dheer - oo ay ku jiraan dilkii George Floyd iyo Daunte Wright ee Minnesota - dhammaantood waxay ku dhacayaan xaalad cimilada sii xoogeysaneysa, taas oo saameynteeda aan si isku mid ah loo dareemin.
Waxaan ku jirnaa daqiiqad xisaabeed, iyo daqiiqad doorasho ah. Waxaan dooran karnaa joogitaanka-bulshada dhexdeeda iyo dhulkeenna gudaheeda-oo aan la imaanno go'aan adag si aan mustaqbalkeenna uga fiicnaanno kan aan hadda ku jirno.
Waana dareemayaa rajo. Khadadkaan ka Amanda GormanGabaygiisa “Earthrise,” wuxuu si qurux badan u muujiyaa rajadan:
Marka waxaan tan kuugu sheegayaa inaanay kaa nixin,
Laakiin si aan kuu diyaariyo, aan kuugu dhiiro galiyo
Inaad ku riyoodaan xaqiiqo taas ka duwan different
Xaqiiqdaas ka duwan tii hore ayaa lagu riyoodaa, laguna dhaqmaa, xaqiiqda hadda.
Minnesota Diimaha kala duwan ee Power & Light waxay lashaqeeyaan iskaashi lala yeesho bulshooyinka caqiidada si loo dhiso awood isbadal keenta nalalka hadiyadaha gaarka ah ee dadka si wax looga qabto dhibaatada cimilada. Sawir ayaa la qaaday ka hor faafida. Sawirka Sawirka: Awoodda & Iftiinka Diimaha ee Minnesota
Waa wax lagu farxo in la arko Mareykanka oo dib ula soo noqonaya hoggaankiisii caalamiga ahaa ee cimilada — Madaxweyne Biden ayaa la filayaa inuu toddobaadkan ku dhawaaqo bartilmaameed himilo leh oo ku wajahan Mareykanka, isagoo rajeynaya inuu dalalka kale ku dhiirrigeliyo inay qaadaan tallaabooyin geesinimo leh. Tani waxay timid ka dib markii Koongareesku ansixiyay biil omnibus ah oo leh sharciga cimilada ugu hanka badan in ka badan toban sano. Bilowgii sanadkaan, Madaxweyne Biden wuxuu saxiixay qodobo amarro fulin ah si loo hormariyo waxqabadka cimilada - oo ay ka mid yihiin ku soo biirista heshiiskii Paris iyo joojinta dhismaha dhuumaha Keystone, oo saliida ka qaadi lahaa Kanada iyada oo loo sii marin lahaa Mareykanka. Waxaan sidoo kale markhaati ka nahay jiil cusub oo hoggaamiyeyaal ah oo ku biiraya horyaallo muddo dheer socday, oo ah halkan Midwest, oo abuuraya xalal cimilo sinnaan leh mala awaal, go'aan, iyo geesinimo.
Runtii, xilligan waa hadda. Iyo Hay'adda McKnight Foundation –oo ay iskaashanayaan kuwa kale oo badan oo ku baahsan gobolkeenna-waxay leeyihiin door xoog leh oo ay ku ciyaaraan. Midwest waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee wasakheeya kaarboonka adduunka. Waa lama huraan in la yareeyo qiiqa gaaska lagu sii daayo — qiyaas ahaan, iyo dariiqa si siman ula wadaagaya malaayiin shaqooyin iyo balaayiin doollar maalgashi cusub — sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan ee gobolkeenna.
Waan ognahay in dhimista qiiqa gaaska lagu sii daayo ay u baahan tahay qotodheer qotodheer — nadiifinta nidaamkayaga tamarta, koronto dhalinta gaadiidka iyo dhismayaasha, iyo iskaashi lala yeesho wakiillada dhul-beereedkeenna, kaymaha, iyo beeraha si loo kala-gooyo kaarboonka, loo ilaaliyo dhulalkayaga, loona shidaal-geliyo dhaqaalaheena. Tobankii sano ee la soo dhaafay, waxaan markhaati ka nahay isbadal layaableh oo kadhigay dhuxusha una badalay dabaysha iyo tamarta qoraxda ee nidaamka korantada ee gobolka, taas oo ay sabab u tahay siyaasad adag iyo shaqada sharciyeynta oo ay hogaaminayaan wada-hawlgalayaasha deeq bixiyeyaasha. Tobanka sano ee soo socota, caqabadeena ayaa ah inaan dardar galino shaqadan isla markaana aan ku balaarino qeybaha kale ee dhaqaalaha iyadoo la hubinayo in bulshada ugu badan ee ay saameysay dhibaatada cimilada ay qaabeeyaan kana faa iideystaan xalalka.
Waxaan fursad u leenahay inaan ku hormarino xalalka cimilada ee sida dhaqsaha badan u dejinaya dhaqaalaheena isla markaana u taageeraya bulshadayada. Tallaabada cimilada ee ballaaran waxay horseed u noqon doontaa maalgashiyo cusub iyo shaqooyin cusub, qaar badan oo ka mid ah deeq bixiyeyaasheena ayaa ka shaqeynaya inay hubiyaan in Midwest ay diyaar u tahay inay dhaqso u dhaqaaqdo. Iyo, deeq-bixiyeyaasha kale waxay diiradda saarayaan dhisidda rabitaanka siyaasadeed iyo adkeysiga lagama maarmaanka u ah joogtaynta waxqabadka cimilada ee cimilada ka dhigi kara dabeylaha is-beddelaya ee maamulka.
Sharaf ayey ii tahay inaan kugu garab maro safarkan, oo runti daqiiqadan aan kula kulmo rajo iyo geesinimo.